DEG DEG Xog Cusub oo Kusoo Korortay Ikraan Tahliil +Maxaa Ka Jira iney noo shahay Xog Sir ah oo la helay - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DEG DEG Xog Cusub oo Kusoo Korortay Ikraan Tahliil +Maxaa Ka Jira...
DEG DEG Xog Cusub oo Kusoo Korortay Ikraan Tahliil +Maxaa Ka Jira iney noo shahay Xog Sir ah oo la helay
Waxaa la yiri “Caddaalad dib loo dhigay, waa caddaalad la dafiray”. Xeer Ilaaliyaha guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya Genaral Cabdullaahi Buulle Kamay ayaa 27-kii July 2021 sheegay inuu guddi u magacaabay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Musharixiinta mucaaradka qaarkood ayaa ka dhigtay Kiiska Ikraan olole doorasho, iyagoo u adeegsanaya hub ahaan, maadaama ay dagaalka kula jiraan Farmaajo, mana jirto qof ay dhab ka tahay raadinta Gabadhan la la’yahay mudada saddex bilood.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa rajo badan laga lahaa inuu u istaagayo raadinta Ikraan, balse ma dhicin, xitaa kama uusan hadlin hal maalin, waxayna cadeynaysaa inuu kiiskan oo Fahad Yaasiin ku biyo-shubtay isaga kursigiisa dhibaato ku keenayo hadii uu soo hadal-qaado.
Qoyska Gabadhan ayaa quus iyo rajo la’aan soo foodsaartay, kadib markii ay waayeen cadaalad iyo xafiis dowladeeda oo dacwadooda dhageysta, kana jawaaba, waxayna ku dhamaatay arintan aamusnaan.
Maxaan ka ognahay Kiiskan?
Xogo la helay dhamaadkii bishii lasoo dhaafay oo rasmi ah oo ku saabsan arrinta Ikraan Tahliil Faarax oo ku dhex-maqan Hay’adda NISA oo ay u shaqeynaysay muddo afar sano ah.
Sarkaal sare, oo katirsan NISA, kaasoo codsaday in magaciisa qarinno, ayaa u xaqiijiyay inay Ikraan nooshay, islamarkaana lagu hayay guri ku yaalla degmada Xamar-Jabab, ee gobolka Banaadir.
“Aniga ayaa indhahayga kusoo arkay Ikraan, waxaa lagu hayaa Guri qarsoodi ah oo NISA ka kireysatay degmada Xamar-Jabab, waxaa ka muuqday jirdil iyo dhaawacyo kala duwan, oo aan u maleynayo inay ku jirto xaalad culus, oo su’aallo la waydiinayo,” ayuu yiri Sarkaalka.